Ukuchazwa kwemisebenzi esemqoka yokufakwa kwezingcingo kwezingcingo eziphuthumayo emishinini emikhulu yohlelo-i-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co, LTD
Ukuchazwa kwemisebenzi esemqoka yokufakwa kwezingcingo eziphuthumayo zomhubhe kuzisombululo ezinkulu zohlelo
ISIKHATHI: 2020-05-25 HITS: 19
1. Abasebenzisi bezingcingo eziphuthumayo bangakwazi ukuxhumana ngqo no-opharetha we-eziphuthumayo zocingo, i-push-to-talk (umhubhe ocingweni).
2. Ngemuva kokuthi umsebenzisi acindezele inkinobho yokunwebeka, isandiso singakwazi ukushaya ucingo kusiqoqelalwazi sesikhungo sokuqapha, futhi sidlulise imininingwane eyisisekelo efana nomaki wamakhilomitha endawo nezinkomba ezikhuphukayo nezansi nomfula.
3. Ucingo ngalunye oluphuthumayo lunekhodi eyingqayizivele yekheli yokulayisha esikhungweni sokulawula, esinquma indawo ocingwayo kuyo futhi yamukele ucingo nokuhlolwa.
4. Ngemuva kwezimpendulo zesisebenzi se-console, angakwazi ukusungula ingxoxo egcwele ngokugcwele ngesikhathi.
5. I-console ingakhuluma nanoma yikuphi ukunwetshwa kwezingcingo eziphuthumayo ezimbili ngasikhathi sinye.
6. Ukwazi ukwamukela umyalo wokutholwa okhishwe ngumgcini we-console, hlola okufika ngesikhathi bese uthumela imiphumela yokuthola kumgcini we-console.
7. Ukwehluleka noma ukulimala kwanoma yiziphi izingcingo eziphuthumayo noma eyodwa eziphuthumayo akufanele kuthinte ingxoxo phakathi kwezinye izingcingo eziphuthumayo nekhonsoli.
8. Isandiso singakhipha ngokuzenzakalela ukuhambisa izwi lapho ushayela, bese ubika isimo sokwenza uhlelo.
9. Ukwazi ukwamukela izingcingo ezahlukahlukene ezivela kumgcini we-console bese ukhulule ngokuzenzakalelayo isekethe ngemuva kokuhlanganiswa kwe-console.
10. Izwi licacile ngenkathi kushaya ucingo, izwi liyakhala, futhi akukho mpendulo ekhalayo.
11. Lapho ukunwetshwa kulimele (ngokwesibonelo, umnyango uvulwa ngokungemthetho) noma ibhethri lingaphansi kukagesi, ulayini unephutha, njll., Isandiso singathumela ngokuzenzakalelayo umlayezo we-alamu kumgcini we-console.
12. Ungangena ngokuzenzakalelayo isimo esisebenzayo sezingcingo nokulinda ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla.
13. Kusetshenziswa amandla elanga, ukonga amandla nokuvikela imvelo.
14. Isandiso samukele izindlela ezahlukahlukene zokuvikela umbani, nomphumela omuhle wokuvikela umbani.
15. Ukuxhumana kwe-amplifier ye-Broadcast power, kungavula futhi kuvala i-amplifier yokusakaza, futhi kungakhipha amasiginali alalelwayo kusikhulisi samandla okusakaza.
16. Isandiso sifakwe izibonakaliso zefilimu ezikhanyayo eziphakeme ezingenisiwe zenkomba yokwamukelwa nokulethwa, nephethini yelogo nombala kuhambisana namazinga kazwelonke.
18. Uhlelo luhlotshiswe ngokuvikelwa kombani. Iyunithi eyinhloko, uhlelo lokunwebeka kanye nokungena nokuphuma kwendawo ngayinye yokufaka amplifier kumele kuxhunywe kwisisetshenziswa sokuvikela umbani ukuvikela ukuhlinzwa okubangelwa ukufakwa kombani kuyunithi enkulu, ukunwetshwa nesandisi-zwi ngasinye sokubhujiswa.
19. Uhlelo lolu lufakwe ngokuvikelwa okungaphezulu- nangaphansi kwamandla. Amandlavolumu kufanele abhekelwe ngokuzenzakalela ngemuva kokuthi ivuliwe ifoni. Uma ibhethri lifile noma i-voltage inganele, ikhompyutha esikhungweni sokuqapha izothusa ngokushesha.
I-COVID 19 ithuba lokuthi izinkampani ezinkulu ze-telecom tech zikhule zikhudlwana
I-Joiwo JWAT203 yalimaza izingcingo zomphakathi ezingahambisani ne-ring Flasher (isibani) yafakwa e-Indoniesia